Hlola iTokyo, Japan - World Tourism Portal
Hlola iTokyo, Japan
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eTokyo, Japan
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eTokyo
Bukela ividiyo ngeTokyo
Hlola iTokyo inhlokodolobha ye Japan. Ngabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-13 asedolobheni elisemthethweni kuphela, iTokyo ingumgogodla wedolobha elinabantu abaningi emhlabeni, iTokyo Metropolis (enabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-37). Leli dolobha elikhulu, elicebile futhi elikhangayo liletha imibono ephezulu yobuchwepheshe besikhathi esizayo eceleni kwamakhanya eJapan elidala, futhi linokuthile kuwo wonke umuntu.
Ngaphezulu kweminyaka ye-500, idolobha laseTokyo lakhula lisuka emzaneni odobayo wase-Edo. Idolobha laqala ukukhula ngempela lapho iba yisihlalo se-Tokugawa shogunate e-1603. Ngenkathi umbusi ebusa ngegama kusuka Kyoto, amandla eqiniso ayegxilwe ezandleni zasesitolo seTokugawa e-Edo. Ngemuva kokubuyiselwa kweMeiji e1868, lapho umndeni wakwaTokugawa wehlulwa yithonya lawo, umbusi nomndeni wasebukhosini bathuthela lapha besuka eKyoto, futhi leli dolobha laqanjwa kabusha ngegama lakhona, iTokyo. Isikhungo esikhulu sezwe, iTokyo yindawo lapho amabhizinisi, ezemfundo, amasiko anamuhla, nohulumeni. (Lokho akusho ukuthi izimbangi ezifana Osaka ngeke ziphikise lezo zimangalo.)
ITokyo inkulu kakhulu: kucatshangwa kangcono hhayi njengedolobha elilodwa, kepha iqembu lezidolobha elikhule ndawonye. Izifunda zaseTokyo ziyehlukahluka ngobuntu bazo, kusukela ekushayweni kwegesi ngo-Akihabara kuya ezivandeni ze-Imperial nezindawo eziphakeme zaseChiyoda, kusuka kwisiko lentsha le-Mecca yaseShibuya kuya ezitolo zobumba nezimakethe zethempeli lase-Asakusa. Uma ungakuthandi okubonayo, gxuma esitimeleni bese ubhekisa esiteshini esilandelayo, futhi uzothola okuhlukile ngokuphelele.
Ubukhulu obukhulu kanye nejubane leTokyo kungesabisa isivakashi sokuqala. Ingxenye enkulu yedolobha ihlathi likakhonkolo kanye nezintambo, enobuningi be-neon kanye nezikhulisazwi ezivuthayo. Ngesikhathi sokujaha, izixuku zigijimisana ezitimeleni ezigcwele nabantu abaningi bathuthela eziteshini ezinkulu eziyinkimbinkimbi. Ungabambeki kakhulu ekubhekeni kokubona izivakashi kulolu hlu lwakho: kubavakashi abaningi, ingxenye enkulu yesipiliyoni seTokyo imane izulazula lapho utholakala futhi ithatha i-vibe, ingena ekhanda lakho ezitolo ezithengisa izinto eziyinqaba nezisimangaliso, izindawo zokudla zokubonelela lapho ungakwazi ukubona into eyodwa kumenyu (noma epuletini lakho), nokuthola ukukhululeka okungalindelekile kokuzola ezindaweni zokuthula zethempeli lamaShinto elingumakhelwane. Konke kuphephile ngokuphelele, futhi abantu bendawo bazoya kwezinye izikhathi ezingajwayelekile ukukusiza uma ubuza nje.
Izindleko zokuphila eTokyo azizona izinkanyezi njengoba zazinjalo ngaphambili. Izingcindezi zeDeplation kanye nezimakethe zisize ukwenza izindleko eTokyo ngokuqhathaniswa namanye amadolobha amakhulu. ITokyo ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu ukuhlala eJapan. Kukalwa futhi idolobha lesihlanu elibiza kakhulu ukuhlala kulo, emhlabeni. ITokyo igcwele kakhulu indawo yokuthi amakamelo ngokuvamile awekho mkhulu kunohlobo lwe-175 square metres (16 metres).
ITokyo ihlukaniswa njengelele endaweni enomswakama engaphansi kwesimo sezulu futhi inezinkathi ezine ezihlukene. Ihlobo livame ukushisa futhi linomswakama ngebanga lokushisa elingama-20-30 ° C. Ubusika buvame ukuba mnene, amazinga okushisa asukela ku-0-10 ° C. Isithwathwa aluvamile, kepha kulezo zikhathi ezingavamile (kanye emva kweminyaka embalwa) lapho iTokyo ishaywa yisivunguvungu seqhwa, ingxenye enkulu yenethiwekhi yesitimela iyeka ukuma. Izimbali eziqhakazile zokuqhakaza ziqhakaza ngoMashi-Ephreli kanye namapaki, ethandwa kakhulu i-Ueno, zigcwalisa izintambo eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye nabesilisa abahola amaholo.
EJapan, yonke imigwaqo, ojantshi, imizila yokuthumela nezindiza kuholela eTokyo.
ITokyo inezikhumulo zezindiza ezinkulu ezimbili: INarita yezindiza zamanye amazwe kanye neHaneda (ikakhulukazi) izindiza ezifuywayo.
ITokyo inenye yezinhlelo ezibanzi kakhulu zokuhamba emhlabeni. Ihlanzekile, iphephile futhi iyasebenza - futhi iyadida. Ukudideka kuvela ngenxa yokuthi kunezitimela eziningana ezihlukile ezisebenza ngaphakathi eTokyo
inethiwekhi yeJR East
amanethiwekhi amabili angaphansi komhlaba
imigqa eyimfihlo ehlukahlukene
Ukukhokha imali kuyinto ejwayelekile. Ama-ATM amaningi aseJapan enza hhayi amukela amakhadi aphesheya, kepha iposi, i-7-Eleven neCitibank (manje esaziwa njengoPrestia yiSMBC) yizo futhi evame ukuba namamenyu amaNgisi (muva nje, iMitsubishi-UFJ ivule ama-ATM ayo ku-UnionPay futhi asebenzisa abasebenzisi bekhadi. * QAPHELA * Kusukela ngoJuni 2013, ama-ATM amaningi asebhange laseJapan awemukeli i-MasterCard, ngakho-ke ngeke ukwazi ukukhipha imali kubo. Noma kunjalo, ukuthenga usebenzisa i-MasterCard kwamukelwa noma kukuphi.
Yize amakhadi wesikweletu esemukeleka kabanzi, abathengisi mancane kakhulu amathuba okuvumela ukusetshenziswa kwabo kunakwamanye amazwe athuthukile.
Uma ithengiswa noma kuphi emhlabeni, kungenzeka ukuthi ungayithenga eTokyo. ITokyo ingesinye sezikhungo zemfashini nezokugcoba emazweni aseMpumalanga. Izinto okufanele uzibheke zifaka i-elekthronikhi, ifashini emnandi, ifenisha yasendulo, izembatho zendabuko (i-kimono, yukata, jimbei, jika-tabi) kanye nezinto ezikhethekile njenge-Hello Hello kanye nezimpahla zePokemon, i-anime namahlaya nezinhlaka ezihambisana nazo. ITokyo inezimboni ezinkulu kakhulu ze-elekthronikhi emhlabeni, njengeSony, Panasonic, neToshiba njll.
Kukhona izitolo eziningi ezilula kulo lonke elaseTokyo, ezivulekile ubusuku nemini futhi zingathengisi kuphela ukudla namamagazini, kodwa nezidingo zansuku zonke njengokugqoka kwangaphansi nezindlu zangasese.
Yini ongayithenga eTokyo
Ubungako obukhulu, izinhlobonhlobo nekhwalithi yokudla eTokyo kuyokumangaza. Izitolo zoMnyango zinamahholo okudla, ngokuvamile egumbini elingaphansi (elibizwa ngokuthi depachika), ngokudla okudlula ama-delicatessens aphezulu kwamanye amadolobha womhlaba. Izitolo ezinkulu kanye nezitolo zomnyango zinezindawo zokudlela, ngokuvamile ezitezi zazo eziphakeme. Ezinye izingaphansi zeziteshi zezitimela zinezitolo ezinkulu ezinezinhloli zokunambitha zamahhala. Kuyindlela enhle yokusampula izitsha ezithile ezingajwayelekile abanazo mahhala. ITokyo inezindawo eziningi zokudlela, ngakho-ke bheka umhlahlandlela oyinhloko waseJapan wezinhlobo zokudla ozohlangana nazo namaketanga athile athandwayo. Amamenyu anezithombe ngokuvamile athunyelwa ngaphandle, ukuze uhlole amanani. Ezinye izitolo zinokudla okudumile kwepulasitiki emafasiteleni angaphambili. Unganqikazi ukudonsela abasebenzi abalindile phambili ukuze ukhombe okufunayo. Njalo phatha ukheshi. Izindawo zokudlela eziningi ngeke zamukele amakhadi wesikweletu.
ITokyo ine amashumi ezinkulungwane zokudlela amelela okungaphezulu noma okuncane emhlabeni, kepha futhi inikeza amakhono akhethekile endawo. Nigirizushi (inhlanzi icindezelwe irayisi), eyaziwa emhlabeni wonke jikelele ngokuthi "sushi," empeleni ivela eTokyo. Okunye ukuthi monjayaki, uhlobo lwe-gooey, iklabishi eligcwele iklabishi le okonomiyaki osebenzisa ibhetri elincanyana kakhulu ukufeza ukuvumelana okunamathelayo, oku-caramelized. Ivela endaweni yaseTsukishima eMapa futhi namuhla kunezindawo eziningi zokudlela eduze ne-Asakusa enikezela nge-monjayaki.
Izitolo zekhofi zivula cishe i-08: I-00 (ngesinye isikhathi ngaphambili eziteshini ezixakekile), izindawo zokudlela ziqala kusuka ku-11: 00 futhi kwesinye isikhathi zivala e-15: 00 noma 16: 00 kuze kuhlwe.
Ukuba ne-11 yokuqala: I-00 yehora-isidina sasemini yindlela elula yokugwema emgqeni ezindaweni ezidumile futhi uzokutholela isihlalo, noma ngabe uza wedwa.
I-Pepper Hot iyatholakala ezinhlelweni ezahlukahlukene, ngesifunda, ngaseTokyo, lo magazini wamahhala unikeza umhlahlandlela ezindaweni zokudlela zesiJapan kodwa unikeza izithombe namamephu ezindaweni zokudlela. Ezinye izindawo zokudlela zize zinikeze amakhuphoni. Izindawo zokudlela eziningi ezikule magazini zisezingeni eliphakathi kuya ezilinganisweni eziphakeme kakhulu.
I-Tabelogis isiqondisi sokudlela sendawo esinokulinganiselwa nokubuyekezwa kwezindawo zokudlela eJapan. Kutholakala ngesiNgisi nangesiJapan.
Kukhona futhi amabhulogi amaningi ku-intanethi anikezelwe ekudleni nasekudla eTokyo okubhalwe yi-foodies aphesheya. Lawa mawebhusayithi angaba ngumthombo omuhle wolwazi oluthembekile kubavakashi.
EJapan, iminyaka esemthethweni yokuphuza / yokuthenga utshwala yi-20.
Iphathi alilokothi lime eTokyo (okungenani emigoqweni ye-karaoke), futhi uzothola imigoqo emincane nemidlalo yokudlela yonke indawo.
Indlela enkulu yaseJapan yokuchitha ubusuku ngaphandle kungaba kwizimbobo zokuphuza zaseJapan ezibizwa ngokuthi izakaya, enikeza ukudla neziphuzo endaweni evumayo, efana nomoya we-pub. Iketanga izakaya njengoTsubohachi noShirokiya bavame ukuba namamenyu wesithombe, ngakho-ke uku-oda kulula, noma ngabe awazi isiJapane - kodwa ungamangali uma ezinye izindawo zinezinhlelo zoku-oda zesikrini zaseJapan kuphela. Kukhona futhi amakilabhu amahle wokuphuma eRoppongi ngezivakashi ezivamile nezijwayelekile.
Amakilabhu avakashelayo nezindawo zasebusuku zasentshonalanga zingabiza kakhulu, ngamakilabhu nezindlu bukhoma eziphoqelela ukukhokhiswa kwemali yangempelasonto (imvamisa kufaka isigqebhezana sokuphuza noma amabili). Ukuthola i-splurge kwisiphuzo noma emibili, iPark Shinjuku's Park Hyatt Tokyo ifaka iNew York Bar ngezinga le-52. Ukunikeza ukubukwa okumangazayo imini nobusuku ngaphesheya kweTokyo, bekuyilungiselelo le-movie Lost in Translation.
Uma umusha edolobhaneni, iRoppongi iyikhaya lamaklabhu amaningi avumelekile nezikhungo ezizosebenza ngokukhethekile okungezona ezaseJapan - kodwa futhi zichichima ababaleli kanye 'nabathengi' abazokuhlupha ngezikhathi ezithile ukukuvakashela amakilabhu abo, lapho kuphuzwa khona iziphuzo kubiza ¥ 5000 nangaphezulu. Yize kunjalo, umcimbi weqembu uyachuma eRoppongi, lapho kungenzeka kube ngumqondo omuhle ukubheka eyodwa yemicimbi eminingi ekhiqizwe ngokuzimele njengeTokyo Pub Crawl. Enye indlela, ezinye izizwe zaseJapan nezakwamanye amazwe esikhundleni sazo zithanda amakilabhu nemigoqo eShibuya, noma iGinza, i-Ebisu, noma iShinjuku.